Kaliya 10% antivirus-ka Android ayaa ogaada dhammaan barnaamijyada xun xun | Androidsis
Eder Ferreno | | Noticias, Amniga
Amniga Android waa arin adag, oo soo saaraya warar badan. Waxaan caadi ahaan arki karnaa in khayaanada qaarkood ay maareeyaan inay ku dhuuntaan Google Play iyada oo loo marayo codsiyada xun, taas oo sababi karta dhibaatooyin badan. Halka adeegsadayaashu leeyihiin siyaabo ogaado haddii ay jiraan codsiyo xaasidnimo ku jirto taleefankaaga casriga ah. Hal dariiqo oo tan loogu talagalay waa antivirus, kaas oo taleefanka looga ilaaliyo marwalba wixii dhaca.
In kasta oo adeegsadayaal badan oo Android ah aysan isticmaalin antivirus. Sababta ugu weyn maxaa yeelay waxaa loo maleynayaa inay jiraan qalabyo horay nidaamka ugu jiray, waa sidee Play Protect kaas oo u noqda difaac. Laakiin kuwa loogu isticmaalo antivirus taleefanka, waxay umuuqataa in dhammaantood aysan u shaqeyn sida ugu wanaagsan. Ugu yaraan sida ku cad daraasad cusub.
Munaasabaddan, AV Comparatives ayaa mas'uul ka ahayd falanqaynta fayraska loo heli karo Android maanta. Istuudiyahaan, maxaad ku arki kartaa halkan, 250 antivirus oo kala duwan ayaa la falanqeeyay. Fayrasyadan fayrasku waxay la kulmeen ilaa 2.000 oo codsi oo cudurka qaba, sidaa darteed waxaa loo raadiyey si loo ogaado midka iyaga ka mid ah ee ugu wax ku oolsan arrintan, markii la baarayo fayrasyada ama malware-ga ku jira.
Shaki la'aan, daraasad aad u xiiso badan, oo caawisa dadka isticmaala Android. Inkasta oo natiijooyinka ay u badan tahay inay layaabi doonaan in ka badan hal. Tan iyo markii kaliya 80 ka mid ah 250 antivirus ee la falanqeeyay ay ogaadeen 30% hanjabaadaha. Kaliya 10% antivirus-ka kujira baaritaanka ayaa awooday inay wada ogaadaan dhammaantood. Markaa farqi weyn ayaa u dhexeeya dareenkan ka dhexeeya midka kale. Maxaa muhiim ah in maanka lagu hayo.
Maaddaama ay jiraan isticmaaleyaal ku leh antivirus taleefankooda Android, ma ilaalinayo habka ay tahay. Waa wax lala yaabo in tirada intaas le’eg ee antivirus-ku ay awood u leeyihiin inay ogaadaan dhammaan hanjabaadaha, ugu yaraan kuwa lagu soo bandhigay daraasaddan. Gaar ahaan tan waa in laga filayo antivirus wuxuu leeyahay heerka ogaanshaha ugu yaraan 90%. Gaar ahaan maanta dhammaan qalabka la heli karo.
Tijaabooyinka waxaa lagu qaaday laba nooc, sida ay sheegeen tan iyo daraasadda. A Galaxy S9 leh Android Oreo kan kalena wuxuu ahaa Nexus 5. Kiiskiisa oo wata Android Marshmallow 6.0 oo ah nidaamka qalliinka. Si aad u tijaabiso barnaamijyada aan si fiican uga shaqeyn noocyada cusub ee nidaamka qalliinka. Fayrasyada antiviruses-ka waxaa lagu rakibay qaab otomaatig ah, kaas oo u oggolaaday inay hawlgeliyaan dhammaan shaqooyinkooda. Marka lagu daro dhaqaajinta WiFi, si markaa adeegyada falanqaynta ee daruuraha isku mid ah ay sidoo kale u shaqeyn lahaayeen.
Imtixaanadu isku mid ayey ahaayeen wakhti kasta. APK cudurka qaba ayaa lagala soo degay taleefanka, rakibay oo shaqeynayay. Fayraska, waxaa jiray waqti ku filan oo lagu ogaan karo halista su'aasha ku jirta, marka lagu daro ogeysiinta isticmaalaha. Inkasta oo tani aysan gebi ahaanba sax ahayn kiisaska oo dhan. Maaddaama kaliya 10% fayrasku ay awood u yeesheen inay ogaadaan dhammaan hanjabaadahaas. Halka seddex meelood laba meel ay leeyihiin heerka ogaanshaha oo kayar 30%.
Kuwa dhibcaha ugu badan ku leh daraasaddan ayaa ahaa AVG, Avira, Avast, Bitdefender, Kaspersky Lab ama ESET, iyo kuwo kale. Marka waxaa jira antivirus caan ah oo loo yaqaan isticmaaleyaasha Android, kuwaas oo lagu yaqaan inay siiyaan difaac wanaagsan. Waxyaabaha hubaal ah inay ka dhigayaan xulashada mid aad u fudud. Sababtoo ah waad ogtahay in antivirus-kani uu ku siin doono qalliin fiican marwalba, adoo ogaanaya hanjabaadaha oo dhan, xitaa kuwii ugu dambeeyay.
Shaki la'aan, waa daraasad muhiimad weyn leh, taas oo cadeynaysa xaalada amaan ee Android. Isticmaalayaasha adeegsada antivirus taleefankooda, waa wakhti ay ka fiirsadaan midka ay isticmaalayaan. Maaddaama ay u badan tahay inay adeegsanayaan mid aan iyaga siin doonin difaac ku filan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Kaliya 10% antivirus on Android ayaa ogaada dhammaan barnaamijyada xun